Akụkọ - Ndụmọdụ nhicha nke Slipper 1
Ndụmọdụ ihicha Slipper 1
Slipper Cdabere Tip 1
Ihu igwe ga-ekpo ọkụ n'oge na-adịghị anya, ọkachasị na Guangdong ebe ahụ, yikwasịla uwe mkpirisi, ntụ oyi na-emeghe. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-ewepụta slippers rọba ha, mana ha na-eru unyi mgbe ọtụtụ ọnwa gachara, unyi na-esikwa ike ịsacha.
Ndị mmadụ ole na ole na-adịghị ege ntị nwere ike na-ehicha slippers na-eyi naanị, mana ọ na-emetụta ọmarịcha ọ bụghị naanị ya, ma nwee ike ibute ọrịa na beriberi. Taa, ọ ga-amasị m ịkọrọ gị obere aghụghọ iji mee ka ọ dịrị gị mfe ihicha slippers gị.
Nke mbụ, anyị na-akwadebe efere efere, tinye ya na mmiri ọkụ, wee fesaa na akụkụ nke ntanye eze. Mgbe ahụ gbakwunye mmanya ọcha ma gwakọta nke ọma. Fanye n'ime mmiri mmiri ịsa efere. Enwere ike itinye slipper ahụ ozugbo n'ime mmiri maka nkeji iri.
Ihe ntacha eze nwere ihe na-acha ọcha na onye na-ahụ maka abrasive, nwere ike wepụ ihe ruru unyi nke siri ike iwepụ, mmanya ọcha nwere mmetụta nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nwere ike igbu nje bacteria na slippers, gbochie iyi slippers na ụkwụ egwuregwu. Ikike nke na-asachapụ ihe dị ọcha na-aga smeary siri ike, jiri ya na-asa slippers otú ahụ, nwere ike nweta mmetụta dị ọcha n'otu aka ahụ.
Ndị na-amị amị na usoro ntinye n'ime mmiri dị omimi nke unyi ga-adị nro, oge a na-eji brush na-ehichapụ akpụkpọ ụkwụ ọzọ, ị ga-achọpụta na akpụkpọ ụkwụ na-aghọ ihe ọhụrụ.
Chere ruo mgbe akpụkpọ ụkwụ ahụ ruru unyi ọzọ, wee jiri usoro a hichaa akpụkpọ ụkwụ, na ị gaghị eyi slippers ruru unyi.
Ọ bụrụ na ị nwere slippers ruru unyi n'ụlọ gị, gbalịa usoro a dị mfe ma dị ọnụ ala.